Bankiga Canada Oo Xiraya Xisaabaadka Xawaaladaha Soomaalida – Bogga Calamada.com
Bankiga Canada Oo Xiraya Xisaabaadka Xawaaladaha Soomaalida
Mid kamid ah Bangiyada ugu wayn wadanka kanada ayaa sheegay in uu joojiyay wada-shaqayntii uu la lahaa xawaaladaha Soomaalida ku nool wadankaas, xilli ay sii kordhayaan cadaadista wadamada reer galbeedku ay ku hayaan dhaqaalaga shacabka Soomaaliyeed.
Sida uu qoray wargayska “The star” ee kasoo baxa wadanka kanada, Bangiga lagu magacaabo ‘The Royal Bank of Canada” ayaa jaray xiriirkii uu la lahaa dhamaan xawaladaha ay leeyihiin dadka soomaalida ee ku nool wadanka Kanada.
Mamulka bangiga ayaa sheegay in ay goor dhaw wada xiri doonaan xisaabihii xawaladahaas ku lahaayeen bangiga.
Xawaladaha isticmaala banigigan ayaa Warbaahinta uu shegay in ay bishiibA isticmaalan ku dhawaad 1500 macaamiil ah, iyagoo dira lacaga ku dhaw 1 million oo dollar bil walba., lacagtaas oo badankeeda loo diro wadanka somalia.
Xiritaanka xawaalaha ayaa waxaa dhaleeceeyay somalida ku nool wadankaasi canada iyagoo shegay in ay xawaladahan muhiim u yihiin kumanaan eheladooda ah oo inta badan ku nool Afrika, gaar ahaan Soomaaliya
Ma cadda sabaha uu bangigan u xiray xisaabaatkii ay lahaayeen xawaladaha somalida ee Kanada, Balse arintaan ayaa kusoo aadaysa xilli inta badan wadamada reer galbeedka ay cadaadis iyo cunaqabatay ku hayaan dhaqaalaha dadka Soomaalida.
Bangiyo fara badan oo ku yaalla qaaradaha Yurub iyo Amerika ayaa sidaan oo kale dhowr jeer albaabada iskugu laabay xisaabaatkii ay xawaaladaha Soomaalidu ku dhex-lahaayeen, iyagoo inta badan sheegaya inay sidaas u sameeyeen kadib cadaadis kaga yimid dowladaha wadamadaas ka taliya, kuwaas oo aanan ku qanacsanayn lacagaha ay dadka Soomaaliyeed ee wadamadooda ku nool u dirayaan eheladooda ku sugan gudaha Soomaaliya.
Wadamada reer galbeedka ayaa marka laga soo tago dagaalka dhanka milatariga ah ee ay kusoo qaadeen dadka Soomaaliyeed ee Muslimiinta ah, waxaa ay sidoo kale ku hayyaan dagaalama dhanka dhaqaalaha, si ay ummaddu mar walba u ahaato mid nugul oo aanan awoodin inay isku-fillaansho gaarto.